'प्रदेश नं. ४ मा मेरो नेतृत्व स्वभाविक' : किरण गुरुङ - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘प्रदेश नं. ४ मा मेरो नेतृत्व स्वभाविक’ : किरण गुरुङ
Posted by Headline Nepal | ८ कार्तिक २०७४, बुधबार १४:२८ |
नेकपा एमालेका स्थायी समिती सदस्य तथा प्रभावशाली नेता किरण गुरुङ यतिबेला प्रदेश नम्बर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको नर्वाचनमा व्यस्त छन । प्रदेश नम्वर ४ को भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले नेता किरण गुरुङ तनहुँ क्षेत्र नम्वर २ (ख) वाट प्रदेश सभामा उमेद्वार बनेका छन ।
विद्यार्थी अवस्थादेखि नै राजनीतिमा होमिएका गुरुङ वामपन्थी आन्दोलनमा लागेर दश वर्ष भन्दा लामो समय भूमिगत जीवन बिताएका व्यक्ति हुन । तनहुँ क्षेत्र नं. ३ बाट पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित गुरुङ २०४८ सालको आम चुनावमा पनि सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । निरन्तर जनताको पक्षमा लागेर राजनीति गर्दै आएकाले आफूलाई जनताले पुन जिताउने उनको बिश्वास छ ।
२०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर ३ बाट अत्यधिक मतले विजयी गुरुङले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्रीको जिम्मेबारी पाएका थिए । गण्डकी धौलागिरी क्षेत्रका पुराना र शिर्ष नेता गुरुङ एमालेको गत महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा चुनाव लडेका थिए ।
उनै गुरुङसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी
प्रदेश नं ४ मा निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ?
देशभरका ३२ जिल्ला अन्तर्गत हाम्रो प्रदेशका ६ बटा जिल्लाहरुमा पहिलो चरणमा ज्यादै उत्साहवद्र्धक तवरले उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । वाम गठबन्धनको तर्फबाट संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता भए पछाडि चुनावी तयारीका लागि पार्टीहरुका संयुक्त बैठक तथा भेलाहरु भइरहेका छन् । तयारी तिव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।
वामपन्थी गठबन्धनबाट मनोनयन दर्ता गर्दै गर्दा त्यस प्रदेशका केहि जिल्लाहरु जस्तै वाग्लुङ, म्याग्दी र मनाङमा वागी उम्मेदवारी परेको छ, यसले गठबन्धनमा संकट पार्दैन ?
हो, केही छिटपुट जिल्लाहरुका यस्तो समस्या देखिएको छ तर यो समस्या हल हुन्छ । केही ठाउँमा सूचनाको अभावले र कही ठाउँमा केही आशंकाले त्यस्तो भएको हुन सक्छ तर उहाँहरु सबैलाई पार्टीले उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन गरिसकेको छ । वामपन्थीहरुका साझा उम्मेदवारहरुलाई विजयी बनाउन उहाँहरुले आफ्नो उम्मेदवारी अबश्य फिर्ता लिनुहुनेछ । यसबाट गठबन्धनको भविस्यमा असर पर्न हामीले दिदैनौं ।
उम्मेदवारी फिर्ता भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
पार्टीका इमान्दार सिपाहीहरुले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । फिर्ता गर्नुहुन्छ । यदी फिर्ता भएन भने आज अटेरी गर्नेहरुलाई भोलि पार्टीले कुनै पनि जिम्मेवारी दिने छैन । उहाँहरुमाथि पार्टीले अन्ततः कारबाही गर्नेछ तर मलाई विश्वास छ, त्यसो गनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।
यो निर्वाचनमा बामगठबन्धन आवश्यक थियो र ? यसो गर्दा एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ता माथि अन्याय भएन र ?
यो गठबन्धन समयको माग हो, आम जनताको चाहना हो । अबश्यनै, गठबन्धको कारण धेरै योग्य साथीहरु उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित हुनुभएको छ । उहाँहरुको बारेमा पार्टीले ज्यादै गम्भीरतापूर्वक सोचेको छ । यस पटक त्याग गर्ने कमरेडहरुलाई पार्टीले उचित व्यस्थापन गर्ने छ । झट्ट हेर्दा उहाँहरु माथि अन्याय भएको जस्तो देखिए पनि उहाँहरुको त्यागको जगमा नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने महान अभियान सफल हुदैछ र समाजवाद निर्माणको बाटो सुनिश्चित बन्दै छ । त्यसैले अन्यायको अनुभूति होइन एउटा युगीन अभियानको आफूलाई एउटा अभियान्ता सम्झेर सबैले गौरवबोध गरौं ।
प्रदेश नम्बर ४ मा स्थानीय निर्वाचनको परिणाममा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो थिए । एमाले र माओवादीको संख्या जोड्दा पनि कांग्रेस अगाडि नै छ ।
के यो प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्छ त ?
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम एउटा कालखण्डको सत्य हो भने यस निर्वाचनको अवस्था र परिणाम अर्को सत्य हो । आजको अवस्थामा यस प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धन ज्यादै मजबुत अवस्थामा छ । त्यसैले अन्य प्रदेशमा जस्तै गरि यस प्रदेशमा पनि दुई तिहाई बहुमत सहित हामीले बामपंथीहरुको सरकार बनाउछौं ।
त्यसो भए त्यो सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ ? पार्टीको प्रदेश संयोजक भएको हिसावले तपाईले हो ?
यस बारेमा पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । पार्टीको बर्तमान जिम्मेवारी र अन्य धेरै कारणले मेरो यसमा दावा स्वभाविक हो । अघिल्ला केही अनौपचारिक छलफलहरुमा यसमा चर्चा चलेका केही कमरेडहरु स्वयंले मलाई मुख्य मन्त्री बन्नुहोस् पनि भन्नु भएको छ । त्यसकारण पार्टीले यो जिम्मेवारी मलाई नै दिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । मैले त्यस हिसावले यस प्रदेशलाई देशकै नमूना प्रदेश बनाउने गरि केहि योजनाहरु सोचेको पनि छु ।
कस्ता योजनाहरु सोच्नु भएको छ ?
अहिले पार्टी केन्द्रले घोषणा पत्र तयार पार्दैछ । त्यसैको जगमा हामीले प्रदेशको पनि घोषणा पत्र बनाउँछौं । प्रदेश सरकारका केही परिकल्पनाहरु हामीले त्यसमा ल्याउँछौं । यस प्रदेशको विशिष्टतामा आधारित केहि कामकाजी र मुर्त योजनाहरु ल्याउने तयारीमा हामी छौं । ती सबै योजनाहरु घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा थाहा पाउनुहुने छ ।
Previousमहिन्द्राको अफरमा बिमलाले जितिन् महिन्द्रा मोजो
Nextमाओवादीका बागी उम्मेदवारले गरे मनोनयन फिर्ता, अब सूर्यमै भोट
गोहीले हात चुँडाएका प्रसाद सेल्फी खिच्दै उपचारपछि घर फर्किए
८ असार २०७४, बिहीबार १५:५१
निरन्तर शोधनान्तर घाटा : आर्थिक संकट निम्तिने त्रास
२१ आश्विन २०७४, शनिबार ०७:३१
कस्तो छ साना दलको निर्वाचन तयारी ?
१ बैशाख २०७४, शुक्रबार ०८:११
गढदेब बुद्धमा पूर्बबनराज्यमन्त्री चौधरीको प्रकृति जोगाउं अभियान
२६ भाद्र २०७३, आईतवार १८:०१
साेलुखुम्बुमा गोली चल्यो, दर्जनौँ सवारीसाधनमा आगजनी
पशुपतिक्षेत्रभित्रका अवैध संरचना हटाउः पशुपतिक्षेत्र विकासकोष
स्वीससरकार र प्रदेश एकसरकारबीच १ अर्बको सम्झौता सम्पन्न
एमसीसीमा सैन्यमामिला तथा सङ्लग्नता निषेधित छ : अमेरिकी दूतावास
एमसिसी तत्काल पारित गराउः कांग्रेस